Toban Mas’alo oo caddayn u ah in Sh. Umal uusan Naasix ahayn (Maqaal) Bile Bilaal SomaliEnglishArabicKiswahiliVideosMuxaadaraadAl-kataaib ChannelAyaama CumarBarnaamijyoAnaashiidAudioMuxaadaraadBarnaamijyoWareysiyoGabayoAnaashiidMaqaalloWarbixinoBayaanaadContact usAbout Us
Toban Mas’alo oo caddayn u ah in Sh. Umal uusan Naasix ahayn (Maqaal) Bile Bilaal Written by Maamul on 02 August 2012. Assalaamu Calaykum Ikhwaani fillah, Alxamdulillah wassalaatu wassalaamu Calaa Nabiyinaa wa xabiibinaa Muxammed scw. Intaa kadib: Waxaan rajaynayaa in dad badani la socdeen Muxaadarooyinkii Ruduuda ahaa ee dhexmaray Sh. Muxamed Cabdi Umal iyo Sh. Alcaalim Xassaan Xuseen Aadam.
Muxaadaraadkaas waxaa ku soo noqnoqday in Sh.Umal uu doonayo in uu u naseexeeyo walaalaha reer Daarulxadiith iyo Mujaahidiinta sidaasina ay dad badan oo caamo ahi iyo kuwo aan wax badan caamada dhaamin u arkaan in Sh. Umal ku saxan yahay arinkaa kuna haboon tahay laakiin aniga ahaan waxaan arkaa arin ka duwan sida dadku moodaan in badanina fahamsan tahay Sh. Umal hadalada ugu badan ee uu ka yiri Mujaahidiinta gaalada la dagaalamaysaa waa kuwo ka dhar beelay naxariis, caddaalad, naseexad iyo wax kasta oo ruux muslim ah loogu muujin karo in uu yahay walaal qaldamay isla markaana u baahan in si deggen loo saxo lana fahamsiiyo qaladkiisa, waxaana tusaale kuugu filan hadalada uu ka yiri Mujaahidiinta Sh.Umal qaarkood waa kuwo muujinaya in xitaa uu ku gaalaysiiyay sida in uu yiraa dhiigga Muslimiinta ayay xalaashadeen waana ognahay ruuxa xalaashada dhiigga Muslimiinta in uu gaal yahay. Waa ilmihii Naafic Al Azraq oo ahaa Sheekhii khawaarijta nooca ugu xumaa ee Azaariqada, in uu yiri waa kuwii Cali Bin Abi daalib dilay oo dhiiggiisa xalaashaday, in uu yiri Gaalada ayaa ka fiican oo macnaheeda laga fahmayo Amisom ayaa ka fiican. Dhamaan erayadaas waxay ku jiraan Muxaadaraadka Sh. Umal iyo Khudba Jimcaha Masaajidka lagu qabto oo aan anigu u aqaano Shirka Jaraa’idka Jimcaha la qabto maadaama umadda aan wax kheyr ah loogu sheegin gaaladana lagu amaano Muslimiintana lagu caayo.
Halkaan waxaan doonayaa in aan baraarujiyo Sh. Umal muxuu Mujaahidiinta waaqacooda ugu dayn waayay iyaga maadaama uusan isagu la socon waaqacooda uu Kenya fadhiyo? Haddii la yidhaa TV yada iyo Dad culumo ah ayaa meesha jooga Jigjigaba waxaa jooga dad ay dhibaateeyeen Xabashidu oo qalad u arka is dhiibidda Ibraahim dheere iyo Culumo meesha ka soo jeedda oo laftoodu waaqaca la socda. Ta labaad markiii Ibraahim Dheere iyo Sh.Umal waa isu Qabiil maxaa keenay in adeerkii u qiil baaro oo uu ugu qiil baari waayay Cabdullaahi Yuusuf oo majeerteen ahaa xagga jahliga diintana ka aad uga liitay Ibraahim dheere iyo Shariif oo isu Taw’iil sheeganayeen muxuu u gaalaysiiyay halkaa waxaan ka dareemay in ay ku jirto meesha FIQI TOLKII KAMA JANNO TAGO.
Fursadaas Sheekha waa dhaaftay wadadii ay ku rideen saaxiibadiina waxay u keentay in sumcadiisii meel xun ka laad laadsato maantana loo arko gaar ahaan shacabka gaaladu xasuuqayso u arkaan Sheekha nin Kenya kula socda xasuuqa, Nin Amisom u fatwooda cidda la dagaalantana neceb. Taaariikhdii wanaagsanaydna maanta madaw badani soo galay kolay anigu caruurtayda waan u sheegayaa in uu jiri jiray nin Umal la yidhaa oo 10 kaan qodob uu xumaan ku sameeyay umadda Muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaana rajaynayaa in la helo ruux culumada maanta ka qora buug lagu cadeeyo mawaaqiftooda iska soo horjeedda. Si umaddu u hesho marjac waxa jiilkan maanta ku sameeyey wadaada amisom uurka kala socda.